RFID အကြွေစေ့ Tag ကို, RFID Coin Card, RFID PVC Round Tag, RFID Coin Card Tag, NFC Coin Tag, RFID PVC Round Card, RFID PVC Round Tag
RFID အကြွေစေ့ Tag ကို
သည်အခြားအမျိုးအစားကဒ် NFC Coin Tag, RFID Coin Card, RFID Coin Card Tag, RFID အကြွေစေ့ Tag ကို, RFID PVC Round Card, RFID PVC Round Tag
RFID ချစ်ပ်: TK4100, TK4001, T5557, T5577, EM4100, EM4305, TI, Mifare 1k S50, Mifare 4k S70, Icode2, UtraLight, FM11RF08, ဂြိုလ်သား h3, etc
အရွယ်: Φ14 / 20mm / 25mm / 30mm, အထူ 0.35 ~ 4mm (သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား )
မှတ်ဉာဏ်: 64-bits / 330bits / 1kbyte
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 125kHz / 134.2KHz / 13.56MHz / 860 ~ 960MHz
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: ISO18000-2, ISO11784，FDX-B က，ISO11785, ISO14443A, ISO15693, ISO ကို 18000-6C / 6B
R / W ကိုအကွာအဝေး: 2~ 10cm, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အကြွေစေ့ tag ကိုဖတ်ပါအကွာအဝေး 10 ~ 100cm
R / W ကိုအချိန်: 1~ 2ms
ဒေတာများသိုလှောင်: >10 နှစ်ပေါင်း
ပစ္စည်း: ကို ABS / PVC / PET / PETG / စက္ကူ / ပွင့်လင်း PVC
ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို: shell ကို encapsulation တွေကိုသေချာချစ်ပ်များနှင့်ကွိုင်, ultrasonic ဂဟေ
IP ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တန်း: IP67 / IP68
Surface to print patterns, LOGO or spray ID number, QR Code ကို, dust-proof, ရေစိုခံ, Anti-တုန်ခါမှု, the product can also be perforated. Or made transparent tag. The coin tag with 3M adhesive in back, easy to paste.
Various RFID chips (EM4100, EM4102, TK4100, Atmel T5557, Atmel T5567, Atmel T5577, EM4069, EM4150, HITAG1, HITAG2, HITAGS, 88RF25612, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, 1-CODE-11, LEGIC MIM256, SR176, SR1X4K, ULTRALIGHT, TI2048, ISO ကို 18000-6C, ISO ကို 18000-6B). From low-frequency 125KHz read-only ID chips, AtmelT5567, Hitag series, to high frequency 13.56MHz Mifare, ငါ SLI ကို code, စသည်တို့ကို, as well as UHF PVC coin card.
Solid PVC laminating process, can do the custom printing of2ပုံစံများ (such as LOGO, portraits, color patterns, စသည်တို့ကို);
အသေးစားအရွယ်အစား, ideal foravariety of industrial items identification and logistics projects;
Available inavariety of sizes and options available (အချင်း 14/15/17/18/20/22/25/30/35/40 / 50မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထုံးစံ) withathickness of 0.35 - 4.0mm or thicker;
The surface can mark the icon, Coding, ID code, လေဆာရောင်ခြည်ကုဒ်, DOD, chip serial number or other signs;
Dustproof, ရေစိုခံ, Anti-ချေး, Anti-တုန်ခါမှု;
Small and exquisite appearance, ကြာရှည်ခံသော, do not fade;
One-Card Solutions, inventory management, property management, ထုတ်ကုန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, gaming chips, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, logistics tracking, conference attendance, biological identification, object recognition, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်, one-way ticket, subway ticket, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူစနစ်များ, or made of anti-metal RFID card, affixed to the metal surface to use.
prev: သတ္တု Credit Card ကို Bottle သဖွင့်လှစ်, အဖွင့် Advertise, လက်ဆောင်ပေးမယ် Decrowner
နောက်တစ်ခု: RFID Transparent PVC အကြွေစေ့ Tag ကို
စမတ်တိုကင်, round Metro လက်မှတ်, လူပျိုခရီးလက်မှတ်, ဂိမ်းတိုကင်, round အကြွေစေ့လက်မှတ်, ယာဉ်အသွားအလာလက်မှတ် Customization round